CHANGHENG TECHNOLODY yepamusorosoro zvebhizimisi muShanghai, vakapfuura ISO / TS16949 yepamusoro advertising hurongwa. Iyo fekitori inovhara nharaunda ye8000 mativi emamirimita, iine vashandi vanopfuura mazana maviri, uye gohwo regore rinosvika mazana mana emamiriyoni eRMB.
SHANGHAI CORBITION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, yakavambwa mu2020, inotarisana nemidziyo uye zvigadzirwa zvekushandisa, ikambani yakazvimirira yebhizinesi iri pasi peChangheng tekinoroji.
Iyo ine anopfuura makumi matatu patent ekugadzira uye yekushandisa modhi, Kusanganisira anopfuura gumi gumi patent yezvokurapa zvigadzirwa zvigadzirwa
Kwemakore, akatopa zvinopfuura zana system mhinduro mune zvigadzirwa dhizaini, kugadzira uye zvimwe kune vekunze uye vekunze maindasitiri vatengi.
Iyo kambani ine akati wandei epasirese anozivikanwa mhando vatengi senge: ZYbio, Sansure Biotech, Daan-gene, Shanghai PHARMA zvichingodaro
Mugore ra2019, akashanda nevashandi veBGI kubatsira Morocco mukurwisa COVID. Kuburikidza nemakore ekuedza, kambani yakunda vatengi kuvimba uye kurumbidza.
Iine mamorekuru ekuongorora tekinoroji senge musimboti, CORBITION ndeyekurapa tekinoroji bhizinesi rinopa yakazara yakazara mhinduro yekumisikidza nucleic acid yekuburitsa chiridzwa, fluorescence yakawandisa PCR chiridzwa, inotakurika detector, yekuongorora reagents, zvipenyu zvinoshandiswa.
Zvigadzirwa zvekurapa zvinogadzirwa, zvakaedzwa uye zvakapetwa mumashopu akachena, asina guruva.
Iyo kambani iri muDongjing Industrial Park, iyo yepakati nzvimbo yeG60 Kechuang Corridor, Songjiang Dunhu, Shanghai, padhuze neDongjing Station yeMetro Line 9.
Iwo maMedical instrument akapfuura epasi rese / epamba kuchengetedzwa kwekuyedza chitupa uye CE chitupa, prodcution liscense yakaisa pane reacord yeHurumende Chikafu neDrug Administration. Iyo kambani zvakare yakapasa iyo ISO13845 yemhando yepamusoro yekurapa manejimendi system.
Iyo yakakosha tsika
Kutarisana nevanhu, sainzi uye hunyanzvi hunyanzvi.
Kuchengetedza hutano, kusimudzira kusimudzira.